Huawei Nexus नयाँ लीक फोटोहरु मा देख्न सकिन्छ Androidsis
Huawei Nexus नयाँ लीक फोटोहरु मा देखिन्छ
चुहावट र अधिक चुहावट। उनीहरूलाई धन्यवाद, हामी टर्मिनलहरू उनीहरूको प्रस्तुत हुनुभन्दा धेरै अघि देख्दछौं, यो स्थितिले आश्चर्यचकक हराउने कारक हो जब कम्पनी सम्मेलन हुन्छ जब यो लगानीकर्ता र आम जनतामा आफ्नो खबर प्रस्तुत गर्न चाहन्छ।
तर हामी २१ औं शताब्दीमा छौं, जहाँ सूचनाहरू पृथ्वीको एक तर्फबाट अर्कोमा सेकेन्डमै उड्छ। यद्यपि धेरै कम्पनीहरूले यो चुहावट गर्न स struggle्घर्ष गर्दछन्, त्यहाँ अरूहरू पनि छन् जसले नयाँ उत्पादनको आगमन हुनुभन्दा पहिले यी लीकहरू हाइप र प्रख्यातता सिर्जना गर्न प्रयोग गर्दछन्। हामीलाई थाहा छैन यदि गुगलले यसको अर्को नेक्सस टर्मिनलहरू फिल्टर गर्न चाहान्छ तर त्यहाँ पहिले नै धेरै लीकहरू छन् जुन यी नयाँ उपकरणहरूमा बाहिर आईरहेको छ जुन छिट्टै प्रस्तुत हुनेछ।
आज Huawei Nexus को बारे मा कुरा गर्ने पालो हो। यो उपकरण चुहावटबाट उम्कन सकेको छैन र आज हामी टर्मिनलको प्रोटोटाइप जस्तो देखिन्छ नयाँ फोटोग्राफहरू देख्छौं। तपाईंलाई राम्रोसँग थाहा छ, माउन्टेन व्यूका केटाहरूले नेक्सस ब्रान्ड मुनि दुई टर्मिनलहरू प्रस्तुत गर्दछन्। ती मध्ये पहिलो एलजीले निर्माण गर्ने छ र दोस्रो चीनियाँ कम्पनी हुवावेले निर्माण गर्ने छन।
Huawei Nexus, धातुले बनेको छ
यदि हामीले भर्खरै एउटा देखे विभिन्न लीकमा आधारित अवधारणा भिडियो जो Huawei Nexus के हुन सक्थ्यो, आज हामी स्टीभ हेमर्स्टोफरबाट नयाँ तस्बिरहरू देख्छौं वा प्रसिद्ध TwitterOnLeaks खाताबाट प्रत्येक ट्विटको पछाडि व्यक्ति भएको कारण राम्ररी परिचित छ।
यी नयाँ स्न्यापशटहरूमा तपाई धातु, टर्मिनलको पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ फिंगरप्रिन्ट सेन्सर केन्द्र मा स्थित डुअल फ्ल्यास एलईडीको साथ क्यामेरा शीर्ष मा स्थित र Nexus र Huawei ब्रान्ड। उपकरण क्यामेरा सेक्सनमा धातु र सायद गिलासको साथ प्ले गर्दछ, जुन तपाईं छविहरूमा देख्न सक्नुहुनेछ, टर्मिनलको चौडाईमा विस्तार गर्दछ। हामीलाई थाहा छैन कि यो अंश शुद्ध सौंदर्यशास्त्र हो वा यदि यसको केहि कार्यक्षमता छ जुन हामीलाई थाहा छैन।
Huawei Nexus को अगाडीको सम्बन्धमा, हामी देख्छौं कि यसको व्यावहारिक रूपमा यसको छेउमा कुनै बेजेल हुनेछैन, त्यसैले यो उपकरणलाई हेर्दा यसले तपाईंलाई पूर्ण स्क्रिन देखाउँदछ। हामी अवलोकन गर्न सक्छौं दुई वक्ता यसको माथि र तल अवस्थित छ, मोटोरोला नेक्सस has को रूपमा छ र हामी हाल मोटो एक्स र मोटो जीमा देख्छौं र अगाडिको क्यामरा.
उपकरण अफवाहको विशेषणहरू र हामी छविहरूमा देख्ने अनुमान गरिएको शारीरिक उपस्थितिको लागि दुबै राम्रो देख्दछौं, एउटा पक्ष जुन देखिएको छ भने नयाँ आईफोन वा मेजुको धेरै सम्झना दिलाउँदछ। र तपाईंलाई यस Huawei Nexus को तपाई के सोच्नुहुन्छ? ?
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » नेक्सस » Huawei Nexus नयाँ लीक फोटोहरु मा देखिन्छ
मलाई पछाडि मनपर्दैन ... यो साँच्चिकै कुरूप देखिन्छ! तिम्रो के बिचार छ?
MXY लाई जवाफ दिनुहोस्
तिनीहरूले फ्रेम संग पारित
[APK] डाउनलोड र स्थापना गर्नुहोस् कुनै पनि Android मा ग्यालक्सी S6 मौसम विजेट
यसको संस्करण .8.0.० मा फ्लोटिफाइले एन्ड्रोइडमा हेड्स-अप सूचनाहरू लाई एक मोड दिन्छ